Warshadaha Alaabada - Soosaarayaasha Shiinaha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Iftiin beerta qorraxda
Iftiinka cawska cadceeda
PV1800 PRO taxane-450v/240v/110v off syst solar solar grid ...
Inverter EH9335-80KS oo ka baxsan korantada xooga weyn iyo awoodda
Dulmarka alaabta Alaabtan ayaa ah badeecadeena shatiga leh, oo loogu talagalay inay siiso dadka isticmaala tayo sare leh oo qorraxda cadceeda ku shaqeeya, waxay dhaaftay CE, UL, iwm Tiro shahaado caalami ah. iyo "hufnaan iftiin aad u fiican" Astaamaha ayaa ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee badeecadan. Awoodda batteriga lithium -ka weyn ayaa lagu dhisay jirka laambadda, kaas oo nuugi kara tamarta qorraxda iyo wada -shaqaynta ...
iftiinka waddada cadceedda SLL-18 Faahfaahinta
Dhammaan Hal Nalal Solar
1. Habka fudud ODM waa la heli karaa
2. FAS + ALS2.0 + VFT + TCS Teknolojiyadda ee Iftiinka Habeenkii oo dhan Xataa Maalinta Daruuraha leh ama Roobka
Codsiga: Meesha la deggan yahay /dariiqa /Goobta Baabuurka la dhigto /Gaar loo leeyahay /waddada /Jidka Lugta /Fagaaraha Dadweynaha
Qeexitaanka 1500 Lumens
1.Habka fudud ODM waa la heli karaa
2.FAS + ALS2.0 + VFT + TCS Teknolojiyadda Iftiinka Habeenkii oo dhan xitaa Codsiga Maalinta Daruuraha leh ama Roobka: Meesha la deggan yahay /dariiqa /Baabuurka la dhigto /Gaarka /waddada /Waddada Lugta /Barxadda Dadweynaha
Pilot laydh waddo oo isku dhafan
Tilmaamidda Intropid Pioneer All-in-one Solar Light 1. Guudmarka Wax Soo Saarka Kani waa badeecadeena shatiga leh, oo loogu talagalay inay siiso adeegsadayaasha laambadda waddada sawirrada cadceedda oo tayo sare leh, waxayna dhaaftay CE, UL iyo tiro shahaado caalami ah. “Xirid fiilooyin lacag la’aan ah, si sahlan loo rakibi karo”, hufnaanta ku -dallacaadda Hhigh ”,“ dulqaad xooggan ”iyo“ hufnaan iftiin oo aad u fiican ”faa'iidooyinka ugu waaweyn ee badeecadan. Batariga lithium ee awoodda badan ayaa lagu dhisay jirka laambadda, ...
Faahfaahinta iftiinka iftiinka qoraxda (nooca la socodka)
1. Dulmarka badeecadda Kani waa badeecadeena shatiga leh, oo loogu talagalay inay siiso isticmaaleyaasheena adeegyada isku -dhafka nalalka iyo amniga. Waxaan soo marnay shahaadooyin badan oo caalami ah sida CE iyo UL. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee badeecadeena waxaa ka mid ah: “Kormeeraha qeexidda sare”, “5G IOT”, “isticmaalka awoodda aadka u hooseeya”, “nolosha batteriga oo xooggan”, “xasilloonida signalada /goyn la’aanta”, “hufnaan aad u fiican”. Jidhka laambaddu wuxuu leeyahay ...
iftiinka dariiqa qoraxda Thermos 2
NALKA JIDKA SOLAR EE SHAQO NADIIFINTA GURIGA Ka shaqeeya heerkulka deegaanka ilaa 60 ℃.
Cimriga bateriga ee aagga heerkulkiisu sarreeyo wuu dheer yahay maadaama hal sifo ay ka hortagi doonto in batteriga weli lagu dallaco jawi kulul oo aan caadi ahayn.
Kaamirada qoraxda ee VS-Q5 oo leh nidaam qaylo-dhaan
Taageerida wareegga laba-madax ee toosan iyo toosan,
Xagasha kormeerka waxaa lagu hagaajin karaa meel fog,
Illaa 355 ° si siman iyo 120 ° toosan,
Xaqiijinta dabagalka omnidirectional.
Iyada oo leh wax ka badan hal, dhaqaale ahaan iyo wax ku ool ah.
SWL-16 (MARS 3) iftiinka darbiga qoraxda oo dib u buuxin kara qorraxda
Tiknoolajiyadda ALS waxay dammaanad qaadaysaa 10 Habeen oo Joogto ah Adeegga Tiknoolajiyada Tiknoolajiyada SGS waxay xaqiijisaa Nolosha Batteriga DheerKa ilaali baalka qorraxda wejiga qorraxda si toos ah si aad u hubiso inay ka qaadi karto gudaha batteriga Li-ion si waxtar leh.
2000 lumen iftiinka darbiga qoraxda ee waddada
1. 3 hababka iftiinka leh dareeraha dhaqdhaqaaqa PIR
2. Xakameeyaha fog wuxuu hagaajin karaa hababka iftiinka wuxuuna dejin karaa saacadda
3. Midab cad oo diiran oo saafi ah oo isku dhafan, oo aan dhalaal lahayn indhaha
4. Tiknooloojiyadda ALS2.1 + TCS ee Iftiinka Habeenkii oo dhan Xataa Maalinta Daruuraha leh ama Roobka.
Codsiga: Darbiga/Jidka/Beerta/Beerta/Fagaaraha/Wadada iwm
Tucano PRO Taxane Qorrax Gacan Iftiin
1. Kiis Aluminium ah, oo sii raagaya oo xoog badan.
2. Naqshadaynta Patent -ka iyo Gacanta, waxay ka soo baxdaa dariiqyada si ay toos ugu qabsato awoodda qorraxda ku filan.
3. Tiknooloojiyadda ALS2.1 + TCS ee Iftiinka Habeenkii oo dhan xitaa Xilliga Daruuraha ama Roobka, gaar ahaan xilliga jiilaalka.
4. Awoodda lithium batari 18650 si ay u taageerto 1500cycles.
5. Codsiga: Darbiga ， Albaabka, Dekedda ， Dhismaha ， Beerta ， Dhismaha ration Qurxinta xayndaabka iyo nalalka
nalka beerta qoraxda SLL-31/31H
Tiknoolajiyadda ALS waxay dammaanad qaadeysaa 10 Habeenno Shaqo Joogto ah
Teknolojiyadda TCS waxay xaqiijineysaa cimri dhererka batteriga
Cinwaanka: dabaqa 1aad, degmada baoan dakhliga ugu horeeya ee shenzhen ee Shiinaha.
Kooxda Eni ee Talyaaniga ayaa la wareegtay Spain ...
Qorshaha aasaasiga ah ee tamarta cusub ee Japan ...
Warshadda nalalka cadceedda ee waddada “ex ...
Rugao ayaa dib u habeyn ku sameyneysa 4 waddo oo dowladda hoose leedahay ...